PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖြစ် ဒေါက်တာ Seal Turnell ကိုရွေးချယ်
▼ March (325)
ကောက်ယူခဲ့တဲ့ ကျည်ဆန်တွေကို ဆင်းတုတော်နဲ့ လက်ဝါးကပ...
န၀မအကြိမ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာမိသားစုမျာ...
ကျိုင်းတုံမြို့၊ ကျိုင်းတုံဘူတာရှိ ရထားတွဲ ၃ တွဲကု...
တိဘက်က တရုတ် မိုင်းတွင်းပြိုကျ တရုတ်လူမျိုး ၈၃ ဦးသေ
“ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ဧပြီ ၁ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ NLD ၀...
ပြည်ပ အခြေစိုက် NLD-LA ကို NLD အသိအမှတ်ပြု
"လက်နက်စွန့်ဖို့ ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး"
အကြမ်းဖက်အထိကရုန်း လက်သယ် ဘယ်သူလဲ ? ဖေါ်လိုက်ပြီ
ဝန်ကြီးဌာနများ၏ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးအချို့ တာဝန်မှ...
“တောင်ကိုရီးယားနှင့် စစ်ဖြစ်နေပြီဟု မြောက်ကိုရီးယာ...
ဒီချုပ် သဘာပတိ ဘဘဦးဝင်းတင် ၏ မှာတမ်း
ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လူတ...
မိုးယံ လူရွှင်တော်ဖလား ပထမဆုရအဖွဲ့
အစိုးရ၀ယ်မယ့် ကျည်ကာကား ၅ စီး
အကြမ်းဖက်အထိကရုံန်း လက်သယ် × ဘယ်သူလဲ ? ဖေါ်လိုက်ပြီ...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တစ်နှစ်ပြည့် ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် (...
အင်အားသုံးပြီး ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းတာ မနှစ်မြို့ဟုဆို...
မိုးယံ လူရွှင်တော်ဖလား ဒုတိယဆုရ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်း...
KIA တပ်ရင်း ၁၇ သို့ ထိုးစစ်ဆင်လာသော အစိုးရတပ်များ ...
အမေရိကန် နှင့် မြောက်ကိုးရီယား ပိုမိုတင်းမာလာ
အဓိကရုဏ်း နောက်ကွယ်က လက်မည်းကြီး
နတ်မောက်မြို့အောင်ဆန်း ကွန်ပြူတာဆောင် ဖွင့်ပွဲ..
ဂျပန်အစိုးရမှ (ODA) ထပ်မှန် ပေးအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ...
လတ်တလော ဆူပူမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်က န...
ပဋိပက္ခများ ပြီးဆုံးရေးအတွက် မေတ္တာထားကြရန် ဘာသာပေါင...
SSA မြောက်ပိုင်း တပ်စခန်း ၂ ခု အစိုးရတပ်က ဖယ်ရှားခ...
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေ...
ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကြို့ပင်ကောက် မြင်ကွင်းမျ...
အကြမ်းဖက်အထိကရုံန်း လက်သယ် ဘယ်သူလဲ? ဖေါ်လိုက်ပြီ
သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှု အကြမ်းဖက်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းဖို့ ၈၈...
မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ ဇီးကုန်းမြို့မြင်ကွင်းများ
ပုတီးကုန်းမှာ နေအိမ်တွေကို ဖျက်စီးမှု ဖြစ်ပွား
ဘယ်လောက်ဖြစ်စေချင်ပါသလည်း...မြပုဏ္ဍမာအငြိမ့် - ၂
ပဲခူးတိုင်း အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ဆူပူ ဖျက်ဆီးမှုများ ...
ဗိုဟ်နေဝင်း လက်စဖျောက် သုတ်သင်တာ ခံလိုက်ရတဲ့ သီပေါ...
၁၉၆၂ ခုနှစ် မှ ယနေ့အထိ ဖုံးကွယ်ဖျောက်ဖျက်ထားခြင်းခ...
ဘာသာရေးပဋိပက္ခ ပျံ့နှံ့မှု အမေရိကန်စိုးရိမ်
အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ် ဆွေးနွေးနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းမှု ပ...
နေပြည်တော် တော်လှန်ရေးနေ့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ေ...
စစ်အတွင်းက သမိုင်း မှတ်တမ်း
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ် ပန်ဝါဖက်တွ...
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ဖြစ်ရပ်များသည် မရိုးသားကြောင်း ...
ရွှေသဘာ ဓါတ်ငွေ့စီမံကိန်း စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများကြောင်...
စင်္ကာပူ မြပုဏ္ဍမာအငြိမ့် - ၁
ကာကွယ်ရေး ဦးစီချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ရာထူးနဲ့စ...
ပဲခူးတိုင်း အနောက် ခြမ်းတွင်လည်း ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုမ...
မီးဘေးသင့် ကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အက...
ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မှု ဒီမိုကရေစီ လုပ်ငန်းစဉ်များ ထိခ...
ရှမ်းမြောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရတပ် လှုပ်ရှားမှုရှိ၊ ပလေ...
ရှူတဲ့လေနဲ့ ဖုန်းအားသွင်းမယ့် AIRE mask
မြန်မာ ဒုက္ခသည် ၅ သိန်းလောက်ကို ဆော်ဒီက နေထိုင်ခွင်...
ဂိုဂဲလ် ဓါတ်ပုံပညာရှင်များ မြန်မာပြည်အတွက် အသက်ရှူ...
ကရင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဒေါ်လာ ...
မင်္ဂလာတောင်ညွှန်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော သတင်းများ မဟုတ်မှန်
KIA နှင့် အစိုးရတပ်များ တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်
ရမည်းသင်းမြို့နယ် ရွာတန်းကျေးရွာမှာ မီးရှို့ အကြမ်း...
စစ်ရေး ထိန်းချုပ်နယ်မြေ သတ်မှတ်ရန် RCSS/SSA တောင်းဆို
တရုတ် ရေနံ ပိုက်လိုင်း လုံခြုံရေးကြောင့် တိုက်ပွဲ ...
အုတ်ဖို အိုသည်ကုန်း မင်းလှ တပ်ကုန်း ဘက်မှာ ဆူပုန်မ...
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ဆိုင်အားလုံးကို ညကိုးန...
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ကရင်နီ ဒုက္ခသည်စခန်း အမှတ် (၂)ေ...
ထိုင်းငါးဖမ်းလှေပေါ်က ရက်စက်မှုအကြောင်း လွတ်မြောက်လာ...
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်အတွင်း ဘာသာရေးအကြောင်းပြ ဆူ...
“ယုံကြည်မှုမရှိလို့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နေတယ်”
မိတ္ထီလာမြို့ ပဋိပက္ခ့ဖြစ်စဉ်အတွင်း၌ သေဆုံးသူ ၃၂ဦးရ...
မိတ္ထီလာပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ် နဲ့ပတ်သက်ပြီး ... ????
သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန...
သံတွဲခရိုင် လ၀က ရုံး မီးလောင်
မိတ္ထီလာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ၃၂ ဦးသေဟု အစိုးရပြော...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရမည်းသင်းမြို့နယ်၌ ဆူပူအကြမ်းဖ...
အဋ္ဌမအကြိမ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာမိသားစုမျာ...
ဒုက္ခသည် နေရာချရေးကိစ္စ တောင်ကုတ်တွင် လူ ၃၀၀ ဆန္ဒပြ၊ ...
မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ မိတ္ထီလာမြို့ မြင်ကွင်း
"မိတ္ထီလာနဲ့ ၃၄ မိုင်ခန့်အကွာက ရမည်းသင်းမှာ မီးလောင...
မိတ္ထီလာပဋိပက္ခ မြန်မာစစ်တပ်မှကိုင်တွယ်ပုံ အမေရိကန်ေ...
မိတ္ထီလာမြို့ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြည်လည်နေရာချထားပေးရေး...
ကယားပြည်နယ်အနီး ဒုက္ခသည်စခန်း မီးလောင်၊ ၄၅ဦး ထက်မန...
သူနာပြု့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ တဦး၏ရင်ဖွင့်သံ
မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခအတွင်း ပိတ်မိနေသူတွေကို သံဃာတော်တချ...
မိတ္တီလာ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပြော...
ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ရေလည်ကျွန်းက မူးယစ်ဆေးဝါ...
မိတ္ထီလာ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း လူ၂ဝကျော်သေဆုံး၊ ၈၈နှင့်...
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့်...
ထိုင်းဘုရင် အုတ်ဂူ အစစ်အမှန်ဟု အတည်ပြု
အပစ်ရပ်ရန် ညှိနှိုင်းနေစဉ် တအာင်းအမျိုးသား လွတ်မြေ...
RFA မှ ထုတ်လွှင့်သည့် မိတ္ထီလာမြို့ မြင်ကွင်း......
God's Army နောက်တဖွဲ့ လာပြီလား
မယုံနိုင်လောက်အောင် မြန်ဆန်သည့် မိတ္ထီလာ မြင်ကွင်း
မိတ္ထီလာတွင် ဆူပူသူများကို ခါးအောက်ပိုင်း ပစ်ခတ်၍ စ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖြစ် ဒေါက်တာ Seal Turnell ကိုရွေးချယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖြစ် ဒေါက်တာ Seal Turnell ကိုရွေးချယ်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်၏ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ၄င်းတာဝန် ယူထားရသော ကော်မတီ များစွာ၏ လုပ်ဆောင် ချက်များတွင် ကောင်းမွန်သော အကြံဥာဏ်ပေး နိုင်ရေးအတွက် ကမ္ဘာကျော် စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါက်တာ Seal Turnell ၂၃-၂-၂၀၁၃ ရက်က သိရသည်။
Australian သတင်းစာ၏ အဆိုအ ရဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ ယခုကဲ့သို့ ရွေးချယ်မှုကို ဒေါက်တာ Seal Turnell က ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် လက်ခံခဲ့ကြောင်း နှင့်၎င်းတို့ အနေဖြင့် ဆက်သွယ် ရေးကွန်ရက် မျိုးစုံမှတစ်ဆင့် အတွေးအ ခေါ်အယူအ ဆများတို့ကို အကြံပြုဆွေးနွေး ပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။
မစ္စတာSeal Turnell သည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ပုံမှန်ဆွေး နွေးဝေဖန်သုံးသပ် နေသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွား ရေးအခြေ အနေကိုလည်း မကြာခဏသုံး သပ်ပြောကြား နေသူဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ မစ္စတာ Turnell နှင့် ဒေါ် အောင်ဆန်း စုကြည်တို့ ယခင်ကတည်း က
ရင်းနှီးမှုရှိကြသူ များဖြစ်သည့် အပြင်မစ္စတာTurnell ကိုယ်တိုင်က ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို လေးစားအားကျ သူတစ်ဦး ဖြစ်သညဟု ထုတ်ဖော်ပြော ကြားထား ဖူးသူဖြစ်သည်။
မစ္စတာTurnell နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်က မြန် မာနိုင်ငံတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးနောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ မစ္စတာTurnellက ၁၀ ကြိမ် အထိလာရောက် ခဲ့ဖူးသည် ဟု သိရကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ Reform များကို ဝေဖန်သုံးသပ် အကြံဥာဏ်များ ပေးနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
By Pyi Myanmar
သတင်းရင်းမြစ် - ဂျာနယ်စုံ သတင်းစာမျက်နှာမှ
Posted by PNSjapan at 8:39 AM